Ndichishanda muPrinta Media kweanopfuura makore gumi, ndakaona Internet ichikurumidza kutanga kukwezva meso, uye pamwe nayo, kushambadza kubva muindasitiri yemapepanhau. Iyo internet senge svikiro inowanikwa, isingadhuri, uye tekinoroji iri nyore nyore. Kunyangwe mukati mekudhinda midhiya, ini ndaigara ndichifunga kuti yega yega svikiro yaive nesimba rayo uye kusasimba. Dzimwe nguva Pepanhau yakanga isiri nzvimbo huru yekushambadzira.
Ndakaedza nepandaigona napo kuwana matekinoroji senge Email Kushambadzira mupepanhau futi, asi chero "Internet" yaionekwa senge svikiro rekuendesa zvirimo nekutengesa kushambadzira… kwete kugadzira hukama. Chero chipi zvacho cheInternet chaivewo pasi pechiremera cheDhipatimendi reIT saka ndaive kutsika zvigunwe zvevamwe vanhu. Pakapinda manejimendi nyowani ndokutanga kubvunza kuti, "Chii chaunoita?", Ndakaziva kuti vaive vasingazive uye ndaifanira kuenda.
Kubudikidza neshamwari uye wandinoshanda naye, Darrin Grey, ndakasangana naPat Coyle ndokujoina femu yavo, Brandirect. Darrin aive uye ari shasha pakutengesa uye network. Pat aive uye ari shasha pakuvaka hukama. Ini ndaive dhata uye tekinoroji mukomana - kutsvaga akanakisa matekinoroji ekuwedzera hukama hwemakambani netarisiro yavo nevatengi. Kwakave kubudirira, Darrin akatengesa, Pat akatungamira, uye ini ndakavaka!
Ndakaenda ku ExactTarget, Email Service Provider, inoshungurudzwa neevhangeri yeCMO uye muvambi Chris Baggott. Meseji yaChris yaive yezve kukosha kusinganzwisisike kwemvumo-based email kushambadza, yakanangisa meseji chaiyo kune vanhu chaivo panguva chaiyo.
Chris Baggott neni takatangawo kusangana nekutaura nezve svikiro. Chris akanzwisisa kukosha kwesvikiro, iro (ini ndinotenda) raive nesimba guru mukufambisa ExactTarget kumberi kweindasitiri. Chris ' Email Yakanakisa Maitiro blog akapihwa kanoverengeka pamusoro pemakore uye ainyatso kuzivikanwa semutungamiri anofunga muindastiri Yekutengesa yeemail - ndatenda muchikamu kublog rake. Apa ndipo pakatanga Chris kuona mukana, zvakadaro. Blogs dzaive dzakanaka mota yeruzivo - asi zvakadaro hazvisi nyore kumutengi kuti awane nugget yegoridhe iyo ma blogger aivatumira.
Zvemagariro midhiya nhanho yekutamba munda. Ini ndinotenda yakakosha kune bhizinesi sezvazvakaita kune democracy. Zvemagariro midhiya zvinopa chero munhu ane keyboard uye internet kuwana kuti ave nezwi. Zvemagariro midhiya zvinopa nzira yemabhizinesi akanaka, akatendeseka ekuvaka hukama netarisiro yavo nevatengi. Haasisiri 'iye anogona kuwana kushambadza kwakanyanya' anokunda. Hapasisina mabhizinesi anofanirwa kubhadhara akakura muzana mabhajeti avo kudhinda uye kutepfenyura midhiya kuti iwanikwe. Iye zvino ivo vanongofanirwa kuita rakakura basa uye izwi rinobuda.